Himalaya Dainik » नायक सुरज पंचोलीमाथि सुशान्त सिंहको ह’त्या गरेको आ’रोप: पिता आदित्यले यस्ताे भने
नायक सुरज पंचोलीमाथि सुशान्त सिंहको ह’त्या गरेको आ’रोप: पिता आदित्यले यस्ताे भने
सुशान्त सिंह राजपूत आ त्मह त्या मामिलामा थुप्रै थ्योरी सोसल मिडियामा भाइरल भइरहेको छ । तिनैमध्ये एकमा आदित्य पंचोलीका छोरा सुरजमाथि सुशान्तको ह त्याको आ रोप लगाइँदैछ । यति मात्रै होइन, उनलाई सुशान्तकी पूर्व म्यानेजर दिशा सालियिनको ह त्याको दो षी बताइँदैछ । यद्यपि, पूरा मामिलामा आदित्यले आफ्नो कुरा राखेका छन् र छोरामाथि लागेको आ रोपलाई निराधार बताएका छन् ।
दिशा र सुरज सम्बन्धमा रहेको बताइन्छ । आ रोपका अनुसार दिशा गर्भवती भएकी थिइन् र सुरज उनीसँग विवाह गर्न चाहँदैनथे । यो कुरा सुशान्तलाई थाहा भएपछि उनले समर्थन गर्ने कोसिस गरे । सुरजको पर्दाफास गर्ने कोसिस गर्न थाले । यो विषयमा सुरजसँग उनको हातपात पनि भयो ।
पछि बदलाको भावनाले सुरजको परिवारले सलमान र अन्डरवर्ल्डसँग मिलेर सुशान्तको ह त्या गरिदिए र अब शक्तिको प्रयोग गरेर यसलाई आ त्मह त्या बताएका छन् । यो थ्योरीलाई विश्वास गर्ने हो भने दिशाको आ त्मह त्याको विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको छ । दिशाले १४ औं तल्लाबाट हाम फा लेर आ त्मह त्या गरेकी थिइन् वा कसैले उनलाई ध क्का दिएको थियो भनेर प्रश्न सोधिँदै छ ।
‘उनले लेखेका छन्, ‘यो सबै यसकारण भएको छ किनभने सुशान्तकी म्यानेजर दिशा सालियान सुरज पंचोलीको बच्चाकी आमा बन्दै थिइन् । उनले सुरजका कारण आ त्मह त्या गरिन् । सुशान्त यसबारे केही गर्न चाहन्थे तसर्थ उनले सुशान्तको ह त्या गरिदिए ।’ यो के पागलपन हो ?’
‘सुरजले आफ्नो जीवनमा पहिले नै धेरैकुरा सहिसकेका छन् । उनलाई बिना कारण नै जिया खानको आ त्मह त्या मामिलामा तानियो र अब उनलाई यसमा पनि मुछिदैँछ । त्यसपछि मानिसहरुले सोध्छन् कि आखिर कोही किन डिप्रेशनमा जान्छन् र आ त्मह त्या गर्छन् ?,’ उनले लेखे । ‘यदि यसरी हरेक कुरामा लामो समयमा अनावश्यक रुपमा मुछिन्छ भने कोही पनि बलियो व्यक्ति पनि टुट्ने गर्छन् । सुरजको धेरैजसो समय र करियर ब र्बाद भइसकेको छ । उनी एक होनहार, सरल र सभ्य पुरुष हुन् ।’
‘रिपोर्टमा लेखिएको छ कि सन् २०१७ मा सुशान्त र सुरजको झगडा भएको थियो र सलमान सुरजको बचाउमा आएका थिए र सुशान्तमाथि चिच्याइरहेका थिए । जबकी यस्तो कुनै पनि घटना भएको नै थिएन । ’
सन् २०१७ मा एक पार्टीको क्रममा सुशान्त र सुरजको झगडा भएको दाबी गरिँदै छ । त्यसपछि सलमान खानले सुशान्तलाई फोन गरेर तथानाम भनेका थिए । यो घटनाबारे कुरा गर्दै पंचोलीले भने, ‘रिपोर्टमा लेखिएको छ कि सन् २०१७ मा सुशान्त र सुरजको झ गडा भएको थियो र सलमान सुरजको बचाउमा आएका थिए र सुशान्तमाथि चि च्याइरहेका थिए । जबकी यस्तो कुनै पनि घट ना भएको नै थिएन । ’ सुरज आफैंले पनि यसमाथि स्पष्टिकरण दिइसकेका छन् ।
‘भोलि यदि सुरज डिप्रेशनमा पुगे भने, भगवानको कानमा नपरोस् तर उनले यदि कुनै घा तक कदम उठाए, के होला ? यसका लागि को जिम्मेवार होला ? यो निकै चकित पारिदिने र दुःखद छ ।’
यदि कुनै पनि घट नामा उनको ग ल्ती छ भने उनी जेलभित्र हुनुपर्छ । कुनै प्रमाण छैन । केही प्रमाणित भएको छैन तरपनि उसलाई किन यसमा संलग्न गराइएको छ ? जो गए, उनीहरुका लागि मानिसहरुले प्रार्थना गरिरहेका छन् । तर जो जीवित छन्, कम्तीमा उनीहरुलाई त शान्तिले बस्न दिनुहोस् ।’
‘मलाई थाहा छैन कि सुशान्तसँग कुन चाहिँ हातपातको कुरा भइरहेको छ ? उनीसँग मेरो कुनै पनि विवाद भएको छैन । यसबारे मैले पहिले नै स्पष्ट गरेकी छु । दोस्रो कुरा के हो भने सलमान खान मेरो जीवनमा किन समावेश हुनुहुन्छ ? के उनीसँग दोस्रो काम छैन ? ’
सुरजले आफ्नो स्पष्टिकरणमा भने, ‘मलाई थाहा छैन कि सुशान्तसँग कुन चाहिँ हात-पातको कुरा भइरहेको छ ? उनीसँग मेरो कुनै पनि विवाद भएको छैन । यसबारे मैले पहिले नै स्पष्ट गरेकी छु । दोस्रो कुरा के हो भने सलमान खान मेरो जीवनमा किन समावेश हुनुहुन्छ ? के उनीसँग दोस्रो काम छैन ? ’
‘मलाई थाहा छैन कि दिशा को हुन् ? मैले उसलाई कहिले पनि भेटेकी छैन । सुशान्तको मृ त्युपछि मलाई उनीबारे थाहा भयो र दुबैको परिवारका लागि मलाई निकै नराम्रो लाग्यो । कसैले यो बकवासलाई आफ्नो नीजि फेसबुकमा लेखे । यसलाई एउटा फिल्मको स्क्रिप्टको रुपमा बनाइयो र भाइरल गर्न सुरु गरियो ।